ကပျပါပေ့ ပီကရေယျ: ဒိုင်ယာရီများ၏ မှတ်စု (၂)
ဒိုင်ယာရီများ၏ မှတ်စု (၂)
“ပေသီး၊ မင်းကို ကြည့်ရတာ ဒီနေ့ နည်းနည်း လန်းနေတယ်။ နေလို့ ထိုင်လို့ ကောင်းတယ် ထင်တယ်”
“မဆိုးပါဘူး ဂေါက်ရာ၊ အရင်ထက်စာရင်ပေါ့။ မင်း ဒီနေ့ လာတာ စောသားပဲ။ ဘာစားပြီးပြီလဲ။ မနေ့က မင်းသူငယ်ချင်းကော မပါပါလား”
“အေး ဟုတ်တယ်။ ဒီနေ့ သူ့လူနာက အရေးတကြီး ဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ မလိုက်နိုင်တော့တာ။ ပထမတော့ လိုက်မလို့ပဲ”
“အော် … သူက ဆရာဝန်လား”
ပေသီး မေးလိုက်သော လေသံနှင့် မေးခွန်းကို ကျွန်တော် သင်္ကာမကင်း ဖြစ်သွားသည်။ သူ့ရောဂါ အခြေအနေကို သိသွားသလားဆိုတဲ့ သံသယတွေ သူဝင်နေပြီလို့ ကျွန်တော် နားလည်လိုက်သည်။ ဒီလိုဆိုရင် သူ့ကိုယ်သူ အေ့ဒ်စ် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိတဲ့သဘောပေါ့။ ကျွန်တော့ အတွေးတွေကို ခပ်မြန်မြန် ဖြတ်လိုက်ပြီး
“မင်းအတွက်ငါ အာလူးကတ်သလိပ် ဝယ်လာတယ်။ ငါလည်း မနက်စာ မစားခဲ့သေးဘူးကွ။ မင်းနဲ့အတူ စားရအောင် ပါဆယ် ထုတ်လာတယ်။ မင်းလည်း မစားရသေးဘူးမလား”
ဒီမေးခွန်းကို ကြားလိုက်တော့ ပေသီးက မလတ်ကို တစ်ချက် လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ပါမစ် တောင်းနေပုံရသည်။ ဒီတော့ မလတ်က ချက်ချင်းပဲ
“ကိုထွန်းက မနက်ခပ်စောစောက နည်းနည်း စားထားတယ်။ သူ စားနိုင်သေးရင် ထပ်စားပေါ့။ ပြင်လိုက်မယ်လေ ကိုထွန်း”
“အေးကွာ သိပ်မဆာပေမယ့် အာလူးကြော်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားသွားတယ်၊ နည်းနည်းတော့ စားမယ်ကွာ နော် မိန်းမ”
“ရှင်က ဒါမျိုးကျ ခွင့်ပြုချက်တောင်းတယ်နော်၊ မပြောလိုက်ချင်ဘူး။ စားပါလို့ ပြောနေမှပဲကို”
“ကဲပါဗျာ။ မလတ်အတွက်ပါ ပါပါတယ်။ အားလုံး အတူတူ စားကြတာပေါ့။ နောက်ပြီး ဒီမှာ မင်း ကြိုက်တတ်တဲ့ လက်ဘက်ရည် ဖန်စိမ့်။ သိတဲ့အတိုင်း မင်းတို့ ရန်ကုန်က လက်ဘက်ရည်ကောင်းကောင်းက ရှားတော့ ငါ့မှာ အဝေးကြီး တကူးတက သွားဝယ်လာရတာ”
“ဟေ့ကောင် ဂေါက်၊ ကျေးဇူးလို့တော့ ပြောမနေတော့ဘူးကွာ၊ ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ အသားကုန် ဆွဲပေးမယ်”
“များများစား ငါ့ကောင်၊ မင်း များများစားမှ အားရှိမှာ”
“ဟ ကောင်းလိုက်တာကွာ၊ စားရင်းနဲ့ မောတောင် မောတယ်”
“ကိုထွန်း ဖြည်းဖြည်းစားပါ ရှင်ရယ်”
“ဂေါက် မင်း မျက်နှာမြင်လို့လား မသိဘူး၊ ငါ ပို စားဝင်သလိုပဲ”
“တယ် ဆိုပါလား။ မင်း များများစားလေ ငါ ဝမ်းသာလေပါကွာ”
“မင်း မှတ်မိလား၊ ငါတို့ ကျောင်းတက်တုန်းကလေ၊ မုန့်စားကျောင်းဆင်းချိန်ဆို မင်းနဲ့ငါ ကျန်ကျောင်း ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တစ်လုံးစာလောက် မုန့်တွေ ဝယ်လာပြီး ကုက္ကိုလ်ပင်ကြီးအောက်မှာ အပြိုင်အဆိုင် စားကြတာလေ”
“မှတ်မိတာပေါ့ကွ၊ အာလူးကြော်နဲ့ ရာပြည့်ကြော်တွေ အများဆုံးပဲ။ ဝေလွင်တို့ စိုးမြင့်တို့လည်း ပါတယ်လေ။ အပင်ကြီးအောက်က စားပွဲခုံပေါ် ကိုယ်ဝယ်လာတဲ့ မုန့်တွေ အကုန်တင်ပြီး ဝိုင်းဆွဲကြတာ၊ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ ပျော်စရာ ကြီးပါကွာ”
ပေသီး၏ အတွေးများသည် ငယ်ဘဝကို ရောက်သွားပြီး ပြုံးပျော်နေရာမှ ချက်ချင်း ပြန်ငြှိုးကျသွားသည်။
“ဂေါက် ငါ မင်းကို တောင်းပန်စရာရှိတယ်။ ငါ့ကို ခွင့်လွတ်ပါကွာ နော်”
ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ကျွန်တော် ကြောင်အန်းအန်း ဖြစ်သွားသည်။
“မင်းနဲ့ငါနဲ့ ကြားမှာ တောင်းပန်စရာ မလိုပါဘူးကွ။ တောင်းပန်စရာလည်း ရှိမှ မရှိဘဲ”
“ရှိတယ်လေကွာ …” ဟုပြောရင်း ပေသီး သက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ချက် ချလိုက်သည်။ ထိုနောက် ဆက်၍
“ဒေစီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မင်းကိုငါ ဆွဲထိုးမိတော့ မလို့လေ၊ မမှတ်မိဘူးလား”
“အော် ဒါလား။ မင်းကကွာ၊ အခုဆို အနှစ် (၂၀) လောက်တောင် ရှိရောပေါ့၊ ငါ စိတ်ထဲ မထားပါဘူးကွာ။ အဲဒီတုန်းကတည်းက မင်းနဲ့ငါ စာရင်း ရှင်းပြီးပြီပဲ”
“ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက မင်းပြောတဲ့စကား ငါ မှတ်မိသေးတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်နဲ့ မင်းနဲ့ငါ ရန်မဖြစ်ချင်ဘူး ဆိုပြီး မင်းပြောခဲ့တယ်လေ”
“အေး ဟုတ်တယ်လေ၊ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်နဲ့ ယောက်ျားနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကြားလို့မှ မတော်။ အမဲရိုးတစ်ချောင်းအတွက် ခွေးနှစ်ကောင် ကိုက်တာနဲ့ ဘာထူးလဲကွာ”
“အဲ့စကားကြောင့်ပဲ မင်းကို ငါ မထိုးဖြစ်တာပေါ့” ဟု ပေသီးက ခပ်ပြုံးပြုံးလေး ပြောလာသည်။ တင်းနေသော စိတ်များ ပြေလျော့သွားပုံ ရသည်။
“ဒါနဲ့ မင်း ငါ့ကို ပေးစရာ ရှိတယ်ဆို”
“အင်း …၊ ခင်လတ်၊ မနက်က ပါလာတဲ့ အထုတ်လေး ဂေါက်ကို ထုတ်ပေးလိုက်ပါလား”
အထုတ်ကို မြင်၍ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေသော ကျွန်တော့်အား ပေသီးက ကြည့်နေရင်း
“ဂေါက် အဲဒါ ငါရဲ့ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်တွေပါ၊ မင်း ယူသွားလိုက်”
ပေသီး၏ စကားများသည် အတော်ပင် ထူးဆန်းနေသည်။ ကျွန်တော် မတွေးတတ်လောက်အောင်ပင်။ သူ ဘာကြောင့် သူ့ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်များကို ကျွန်တော့်အား ပေးပါသနည်း။ နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေ၍ မေးမည်ဟု ပါးစပ်ပြင်လိုက်စဉ်မှာပင်
“မင်း ဖတ်ကြည့်ပေါ့၊ အဲဒီ စာအုပ်တွေထဲမှာ ငါနဲ့ ဒေစီအကြောင်းပဲ အဓိကထားပြီး ရေးထားတာပါ”
“နေဦး နေဦး။ စာအုပ်ထုတ်ကို ပေးတုန်းက ဘာလို့ ပေးသလဲလို့ ငါ ထူးဆန်းနေတာ၊ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်မှန်း သိတော့ ပိုပြီး ထူးဆန်းသွားတယ်။ အခု ဒေစီအကြောင်း ဒိုင်ယာရီ ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်အောင်ပဲ”
“မင်းဆီမှာ ဒေစီရဲ့ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်တွေ ရှိနေတယ် မဟုတ်လား”
ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်တော့ပါ။
“ဒေစီ မင်းကို ပေးလိမ့်မယ်လို့ ငါ ကြိုသိထားတယ် ဂေါက်”
“အင်း ထားပါတော့။ ဒေစီရဲ့ စာအုပ်နဲ့ ဘယ်လို ပတ်သက်လဲ၊ ငါ နားမရှင်းဘူး”
“မင်း ဖတ်ရတာ ပို ပြည့်စုံ စေချင်လို့ပါ”
“ဟင့်အင်း၊ ငါတို့ အားလုံးအကြောင်းကို”
“လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၂၀) က ငါ မင်းကို မေးခွန်းတစ်ခု မေးဖူးတယ်လေ မှတ်မိလား။ ငါတို့ နှစ်ယောက် အကြားမှာ မင်း အဲဒီလို ကပျက်ကယက် လုပ်ရအောင် မင်း ဒေစီကို ကြိုက်နေလို့လား၊ အေး … မင်း ကြိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ငါ နားလည်ပေးလို့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် ခွင့်တော့ မလွှတ်နိုင်ဘူး လို့ ငါ ပြောခဲ့တာ မင်း မှတ်မိသေးလား”
သူ၏ မေးခွန်းကြောင့် ကျွန်တော် တွေသွားသည်။ ပေသီး၏ မျက်နှာထားကိုလည်း တစ်ချက် လှမ်းကြည့်မိသည်။ သူ စိတ်တိုပြီး ပြောနေမှာကို ကျွန်တော် အလွန် စိုးရိမ်မိသည်။ သို့သော် သူကတော့ ပုံမှန် ပြောရိုးပြောစဉ် ပြောနေသလိုပင်။ ထိုနောက် အားတင်း၍ ဖြေလိုက်ပါသည်။
“အင်း … ၊ မှတ်မိပါတယ်”
“ဒေစီကို ကြိုက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကို မင်း ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် ဖြေသွားတယ်လေ”
“ဒါဆို မင်းက မယုံဘူးပေါ့”
ထိုအခါ ပေသီးသည် မချိပြုံး ပြုံး၍ ခေါင်းခါ ပြလိုက်ပြီး
“ဖြစ်မှ မဖြစ်နိုင်ဘဲ ဂေါက်ရာ၊ ဒါပေမယ့် ငါ စိတ်နည်းနည်း ပြေလာတော့ ပြဿနာ ဆက်မဖြစ်ချင်တာကြောင့်မို့ ဒီအတိုင်း ငြိမ်နေခဲ့တာပါ”
“အော် …” ဟုသာ ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် တ မိတော့သည်။ ဟိုတုန်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်လှပြီ အောက်မေ့မိသော
အဖြစ်ကို ပြန်မြင်ယောင်ပြီး ရှက်လာမိသည်။
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ဂေါက်ရာ၊ မင်းဟာ ငါတို့ နှစ်ယောက်လုံးအတွက် သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ပါ”
သူ၏ ပါးစပ်မှ ထိုစကားကို ကြားရသောအခါ ကျွန်တော် ပို၍ပင် ရှက်သွားသည်။ကျွန်တော် ချစ်ခဲ့မိသော ဒေစီနှင့် ပေသီးကို အဆင်မပြေအောင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးခဲ့ဖူးသည် မဟုတ်ပါလော။ ထိုအကြောင်းများ ခေါင်းထဲ တန်းစီပြီး ဝင်လာလေ ကျွန်တော် မျက်နှာကို ဘယ်လို ထားရမှန်း မသိလေ ဖြစ်လာသည်။
“ဒေစီက မင်းကို ပိုခင်ပါတယ်။ အစ်ကိုတစ်ယောက်လိုလည်း အားကိုးရှာတယ်လေ။ နောက်ပြီး … ”
ဟု စကား ရပ်လိုက်တော့ ရှက်၍ ငုံ့နေသော ကျွန်တော့်ခေါင်းမှာ အလိုလို ထောင်လာပြီး သူ့ကို မော့ကြည့်လိုက်သည်။
“မင်းအပေါ် ပိုပြီး သံယောဇဉ် ရှိရှာပါတယ်”
ဟု ပြောပြီး သူသည် ဒေစီနှင့် အတွေးထဲတွင် တွေ့ဆုံနေပုံရသည်။ မျက်လုံးစင်းနေပြီး မောနေပုံ ရှိသောကြောင့် ကျွန်တော်လည်း ဘာမှ မပြောတော့ဘဲ ငြိမ်နေလိုက်သည်။ သူတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်၏ အတွေးများသည်လည်း အတိတ်သို့ပင် နောက်ကြောင်းငင်၍ ဒေစီကို မြင်ယောင်နေမိသည်။ ဒေစီသည် တကယ်တမ်းတော့ မေတ္တာ ငတ်ခဲ့ပါသည်။ နည်းနည်း ရရှိသောအခါတွင်လည်း စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် ပို၍ ပို၍ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ငယ်ငယ်က ငတ်ခဲ့သော မိဘမေတ္တာ၊ ကြီးလာတော့ ငတ်ခဲ့သော သူငယ်ချင်းမေတ္တာ၊ အရွယ်ရောက်တော့ ငတ်ခဲ့သော ချစ်သူ့မေတ္တာ၊ အိမ်ထောင်ကျတော့ ငတ်ခဲ့သော လင်သားမေတ္တာ။ သူပဲ တောင်းဆိုတာ များလို့လား၊ ရတာကိုပဲ မယုံရဲလို့လား မသိ။ သူ အမှန်ပင် မေတ္တာ ငတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော် သူ့ကို ချစ်ခဲ့သောကြောင့် ကျန် မိန်းမများအားလုံးကို မုန်းခဲ့ဖူးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူ ကျွန်တော့်ကို ပြန်မချစ်သောကြောင့်ပင်။ ချစ်ခြင်းနှင့် မုန်းခြင်း ရောလိုက်လျှင် အဆိပ်ဖြစ်သွားမည်ကို ကျွန်တော် သွေးအေးမှ သိလိုက်ရသည်။ ထိုအဆိပ်ကိုပင် စေတနာဟု ထင်ယောင်ခဲ့သောအခါ အဆိပ်မိသောသူသည် သူတို့ နှစ်ဦးတင် မကတော့ဘဲ ကျွန်တော်ပါ အဆစ်ပါသွားသည်။ ထိုကြောင့်လည်း ပေသီးသည် ဆွဲထိုးချင်လောက်အောင် ဒေါသထွက်ခဲ့ရသည်။ ဒါကိုလည်း ကျွန်တော်က ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် ဖြေရှင်းချက်တွေ ပေးခဲ့ဖူးသည်။ သူငယ်ချင်းကောင်း တစ်ယောက်ပါဟု ပြောသော ပေသီး၏ စကားကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ ကြားယောင်နေပြီး ပို၍ပို၍ ရှက်နေမိပြီ။
ပေသီး နားနေသည်ကို မနှောက်ယှက်ချင်တော့ပါ။ သူ စိတ်လည်း ပင်ပန်းပြီ၊ လူလည်း ပင်ပန်းပြီ။ လူနာမပြောနှင့်၊ ကျွန်တော်ပင် အတွေးများကြောင့် မွန်းကြပ်ပြီး နေလို့ထိုင်လို့ပင် မကောင်းတော့။ ထိုကြောင့် မလတ်အား နှုတ်ဆက်၍ ပြန်တော့မည်ဟု အထတွင် ပေသီး မျက်လုံး ပွင့်လာသည်။
“မင်း ငါ့ကို အမှန်အတိုင်း ဖြေမလား ဂေါက်”
သူ ဘာမေးမည်ကို ကျွန်တော် သိနေသောကြောင့် အသက်ရှူများပင် ကြပ်လာသည်ဟု ထင်ရသည်။
“သိပြီးသား အကြောင်းအရာက ဖြေစရာ လိုသေးလို့လားကွာ”
“ငါက ကြားချင်တယ် ဆိုရင်ကော”
“ …. …. ”
“မင်းက မဖြေရဲတာလား၊ မဖြေချင်တာလား”
“ရှိပါတယ်၊ မင်းမှာ ရှိကို ရှိတယ်။ ငယ်ငယ်ကလို မင်းနဲ့ငါ ရန်ဖြစ်ဖို့ ဒီမေးခွန်းကို မေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ …. ”
ဟု ပြောပြီး ငြိမ်နေလေသည်။ သူ့ဖာသာ ပြောသော နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဟူသော စကားကို သူ့နားဖြင့် ပြန်ကြားရပြီး စို့နင့်နေပုံ ရသည်။ သူမပြောနှင့် ကျွန်တော်၏ မျက်လုံးများပင် မျက်ရည်များဖြင့် မှုန်ဝါးနေလေပြီ။ အနည်းငယ်ကြာတော့ ပေသီးသည် အသက်ကို ခပ်ရှည်ရှည် ရှူသွင်းလိုက်ပြီး
“နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ကွာ၊ သိချင်တဲ့ သဘောသက်သက်ပါ”
အင်း ဟု ဖြေလိုက်ရန်မှာ ကျွန်တော်၏ လည်ချောင်းတွင် တစ်စို့နေသည်။ စိတ်ကူးဖြင့် အင်းလိုက်လျှင်ပင် ငိုသံက ပါနေသောကြောင့် ကျွန်တော် မျက်နှာလွှဲပြီး သူပေးသော စာအုပ်များကို အိတ်ထဲ သေချာထည့်နေလိုက်သည်။ အာရုံလွှဲနေခြင်း သက်သက်သာ။ သို့သော် သူ မြင်အောင် ကျွန်တော် ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သည်။
“ငါနဲ့ဒေစီ သမီးရည်းစားဖြစ်တဲ့နေ့ မင်း မှတ်မိလား”
“အင်း၊ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့”
“မှတ်မိသားပဲ၊ မင်း ဘာကြောင့် မှတ်မိနေသလဲဆိုတာ ငါ သိပါတယ်။ သူငါ့ဆီ ဖုန်းမဆက်ခင် မင်းဆီကို သူ လာသေးတယ်မဟုတ်လား”
“အေး၊ ငါ့ဆီက ပြန်သွားပြီး ချက်ချင်းပဲ မင်းတို့ သမီးရည်းစားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ ငါတောင် အတော် အံ့သြသွားတာ”
“တကယ် အံ့သြတာကော ဟုတ်ရဲ့လား ငါ့ကောင်ရာ၊ မင်း ဒီလို ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကြိုတွက်ထားလောက်မှာပါ။ ငါ သိချင်တာက အဲဒီတုန်းက မင်း ဘာလို့ ခေါင်းမညိတ်ခဲ့တာတုန်း”
“မင်းက ဘာကို ဆိုလိုတာတုန်း”
“ငါမေးတဲ့ မေးခွန်း မင်းသိပါတယ်၊ အဲဒီတုန်းကသာ မင်း ခေါင်းညိတ်ခဲ့ရင် သူ့ရည်းစားက ငါ မဟုတ်ဘူး။ မင်းပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ ဘာလို့ ခေါင်းမညိတ်နိုင်ခဲ့တာလဲ၊ အဲဒါ အရမ်းကို သိချင်နေခဲ့တာ”
“ထောင်ချောက်ကို ထောင်ချောက်မှန်းသိလျက်နဲ့ ဇွတ်တိုးဖို့ ငါ့ဦးနှောက်က ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး၊ ပေသီး”
“ထောင်ချောက် … ၊ အချစ်ကို ထောင်ချောက်လို့ မင်း မြင်တယ်ဆိုတော့၊ အဲဒါ အချစ်စစ်မှ မဟုတ်ဘဲ”
“ငါ အတ္တ နည်းနည်း ကြီးခဲ့တာတော့ အမှန်ပဲ၊ အဲဒါ အချစ်စစ် မစစ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ အချစ်စစ်ကို ဆင်ခြင်ဉာဏ်နဲ့ ရောလိုက်ရင် စွန့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ ရလဒ်တွေလည်း ထွက်လာတတ်တာပဲ မဟုတ်လား”
“အဲဒီ စွန့်လွှတ်ခြင်းကြောင့်ပဲ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာတွေက အဆိပ်ဖြစ်ပြီး ဘေးလူတွေဆီပါ အဆိပ်ပျံ့သွားမယ်လို့ မင်း ထည့်မှ မတွက်ခဲ့ပဲ ဂေါက်ရာ”
“ဒါကြောင့် ငါ အတ္တ ကြီးခဲ့တယ်လို့ ကြို ဝန်ခံထားတာပေါ့။ တစ်ခုခု ဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်တော့ ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ ဒေစီ့ကို လျှော့တွက်ထားခဲ့တာလေ”
“ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒေစီ မင်းကို ….. ….. ၊ အင်း … ၊ ကဲ ဂေါက်၊ ဒီနေ့ စကားတွေ အများကြီး ပြောလိုက်တာ တော်တော်လေးလည်း မောသွားပြီ။ ငါ နားဦးမယ်ကွာ။ မင်းလည်း ပြန်ချင် ပြန်လေ”
ဟုပြောကာ ပေသီးသည် မျက်ခွံနှစ်လွှာကို စုံမှိတ်၍ အနားယူနေသည်လော၊ အတိတ်ကို တူးဆွနေသလော ကျွန်တော် မဝေခွဲတတ်တော့ပါ။
Wednesday, February 22, 2012 | စာညှနျး ဝတ္ထုရှည်
ဤပို့စ်အား Wednesday, February 22, 2012 နေ့တွင် ရေးသားထားပြီး ဝတ္ထုရှည် နာမည်ဖြင့် အညွှန်း သက်မှတ်ထားပါသည်။ ကွန်းမန့်များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိလိုလျှင် RSS 2.0 ဖြင့် တောင်းဆို၍ ရယူနိုင်သည်။ လာရင်းနေရာ သို့ ပြန်လည် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။